अर्थविद भन्छन्, 'आश्रित विधेयक फेल भएपनि समस्या पर्दैन'
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भएपनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने दावी गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. नेपालले भने,‘अहिले पूरानै व्यवस्था अनुसार कर उठ्छ, तत्काललाई कानुनी समस्या छैन, आन्तरिक ऋणको तत्काल आवश्यकत्ता छैन, अर्को सरकार बनेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।’ नेपालले विद्येयक फेल भएपनि गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम् ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, काठमाडौँ। सन् २०३०(विसं २०८७तिर) सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाको माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो । लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन प ... बाँकी अंश»
९ अर्ब बढीको सेयर कारोबार
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५३ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन एक हजार ७९८ अङ्कमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा एक सय ५१ कम्पनीको रु नौ अर्ब तीन करोड ६९ लाख २४ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कुल एक करोड ४६ लाख ३३ हजार ४६० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताभन्दा ४९.६४ प्रतिशत बढिरहेको छ । गत साता १५९ कम्पनीको रु छ अर्ब चार करोड ६८ लाख ७४ हजार बराबरका एक करोड एक लाख ... बाँकी अंश»
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे मात्र देश विकास हुन्छ : डा महत
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे मात्र देश विकास हुने बताएका छन् । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ३४ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, लमजुङ– काठमाडौँ सम्पर्क समितिद्वारा आज आयोजित ‘बिपी चिन्तन र नेविसङ्घ’ विषयको अन्तक्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले भने , “प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरेका कारण देश बिस्तारै विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ, यो नेपाली काँग्रेसल ... बाँकी अंश»
पहिरोले दुई लघुजलविद्युत् परियोजना बन्द
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, बाबियाचौर (म्याग्दी) । म्याग्दीको लुलाङ र मुनामा रहेको दुईवटा लघुजलविद्युत् परियोजना पहिरोका कारण बन्द भएको छ । पहिरोले विद्युत् गृहमा क्षति गरेपछि मुना– ४ मा रहेको ६० किलोवाट क्षमताको प्रथम दरखोला र लुलाङको लमसुङस्थित ३५ किलोवाट क्षमताको दोस्रो दरखोला लघुजलविद्युत् परियोजना शनिबारदेखि बन्द भएको हो । लधुजलविद्युत् लुलाङ गाविसका ३०० र मुना गाविसका ८०० घरधुरी विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । विद्युत्गृह भवन भत्कने अवस्थामा रहेका छ ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ८ शनिबार, काठमाडौं। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुमा बसोबास गर्ने एनसेलका ग्राहकहरुले अब सम्भावित बाढी र पहिरोबारे आफ्नै मोबाईलमा एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना पाउने छन्। एनसेलले शुक्रबार जल तथा मौसम विभागसँग पूर्वसूचना प्रदान गर्नका निमित्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यसले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बस्ने परिवारलाई सम्भावित बाढी पहिरोको पूर्व चेतावनी प्राप्त भई सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षति हुनबाट बच्न मद्दत गर्नेछ। ... बाँकी अंश»
ऋण तथा जमानत विधेयक समेत अस्वीकृत
२०७३ श्रावण ७ शुक्रबार, काठमाडौं । बजेटको आश्रीत तीन वटै विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । तेस्रो विधेयकको रुपमा रहेको ऋण तथा समानत विधेयक अस्वीकृत भएसंगै तीन वटै विधेयक अस्वीकृत भएका हुन् । यसअघि, बैठकबाट आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अस्वीकृत भइसकेका छन् । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच शब्द जुहारी भयो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक्लैले सबैले राखेका सवालको जवाफ पर्काए । उनले कसैलाई पनि जवाफ पर्काउन बाँकी राखेनन् । मन्त्री पौडेलले फेरिएको परिस् ... बाँकी अंश»
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि अस्वीकृत
२०७३ श्रावण ७ शुक्रबार, काठमाडौं । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयक संसद बैठकमा रहेका बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेका हुन् । सभामुखले छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । छलफलका क्रममा सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । छलफलमा कांग्रेस सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले ऋण विधेयक आवश्यक नभएको र अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिए पनि हुने भन्दै टिप्पणी गरे । जवाफमा अर्थमन्त्री वि ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ७ शुक्रबार, काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । व्यवस्थाविका संसदमा भएको छलफलमा सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्णयार्थ पेश गरेको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । यस्तै, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा छलफल नै नगरी छोटो पद्यति अपाइँदा होहल्ला भएको छ । सभामुख झुक्किएपछि पुनः निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिन् । सांसदहरुको मत विभाजनले सभामुख झुक्किएपछि संसदमा हाँसो र होहल्ला मच्चियो । आजको संसद बैठक मधेसवादी दलहरुले समेत बहिस्कार गरेका छैनन् ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ७ शुक्रबार, भद्रपुर । मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापाले आव २०७२÷७३ मा कुल रु २५ करोड ८२ लाख १८ हजार ६५ राजस्व सङ्कलन गरी उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । कार्यालयले अघिल्लो वर्ष रु नौ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख विजय पौडेलको सक्रियता, क्षमता एवम् कुशलताका कारण राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको पाइएको छ । सङ्कलित राजस्वमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६२९, पुर्जा वितरण दस्तुर रु छ लाख ४५ हजार ३००, डोर दस्तुर र ... बाँकी अंश»
आन्तरिक राजश्वले देखायो १०५ प्रतिशतको प्रगति (विवरण सहित)
२०७३ श्रावण ६ बिहिबार, काठमाडौं। आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लक्ष्य भन्दा १ सय ५ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कूल लिएको १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रूपैयाँ कूल लक्ष्य लिएकोमा असार मसान्तसम्म २ खर्व ४ अर्व ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार असुली भएको विभागले जनाएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि आयकर तर्फ जम्मा रु १ खर्व ९ अर्व ७ करोड ४७ लाख ४३ हजार, मू.अ.कर तर्फ रु.४८ अर्व १८ करोड १ लाख ४२ हजार, अन्तःशुल्क त ... बाँकी अंश»
निगमको साढे २ अर्बको निर्णय किन उल्ट्याए आपूर्ती सचिवले ?
२०७३ श्रावण ६ बिहिबार, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आवश्यक पर्ने ग्यासको लागि कूल ५ सय ३० वटा ग्यास बुलेटले भारतबाट ग्यास ओसारिरहेका छन् । तर, नेपाल र नेपालीको नाममा अहिलेसम्म एउटा पनि ग्यास बुलेट नहुनु आफैंमा दुखद् कुरा त पक्कै पनि हो । अझ नौ महिना अगाडि भारत सरकारले संविधान जारी भएसँगै नेपालको नयाँ संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरेको नाकाबन्दीको समयमा नेपालले सबैभन्दा बढी पीडा बेहोरेको थियो । आफ्नो ग्यास बुलेट नहुँदा अन्य मुलुकबाट ग्यास ल्याउन चाहेर पनि नसकिरह ... बाँकी अंश»
प्राइम कमर्सियल बैंकले ३:१ हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने
२०७३ श्रावण ६ बिहिबार, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका बैंकहरुलाई रु. ८ (आठ) अर्व चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन जारी भए अनुसार प्राइम कमर्सियल बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्नेभएको छ। प्राइम कमर्शियल बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेको ३:१ हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने निर्णयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। यो हाल कायम रहेको शेयरको ३:१ हकप्रद शेयर बिक्री गरे पश्चात बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु. ४ अरव ९४ करोड पुग्ने छ। ... बाँकी अंश»
नेपाल र तिब्बतबीच सोह्रबुँदे समझदारी
२०७३ श्रावण ५ बुधबार, काठमाडौँ । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच द्विपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल-तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको आज य सम्पन्न नवौँ बैठकमा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच त्यस्तो सहमतिसहित पारस्परिक हित प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । चारदिने उक्त समितिको बैठकको समाप्तिसँगै हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रअनु ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक १३.९ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार ८०० बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार दैनिक नयाँनयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै अगाडि बढेको बजारले आज थप अर्को ‘रेकर्ड’ कायम गरेको हो । बजार खुल्नेबित्तिकै एक हजार ८१३ अङ्कमा पुगेको नेप्से पछि थामिएर एक हजार ८००.३२ अङ्कमा कायम रह्यो । कुल १३९ कम्पनीको सेयर कारोबार भएकामा २९ लाख २ हजार १२७ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । रु दुई अर्ब १४ करोड ८६ हजार ४८५ मू ... बाँकी अंश»
महानगरपालिकाले बत्तिस करोड राजस्व बढी उठायो
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२/७३ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ३२ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा रु एक अर्ब ४६ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेका कामपाले रु एक अर्ब ११ करोड ९९ लाख रकम असुल गरेको थियो । त्यसैगरी गत आवका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड २० लाख लक्ष्य रहेकामा रु एक अर्ब ४३ करोड १८ लाख ४८ हजार मात्र रकम असुल गरेको छ । आम्दानी समग्रमा बढे पनि शीर्षकगत रुपमा भने राजस्व सङ्कलन त्यति राम्रो रहेको पाइँदैन ... बाँकी अंश»
बजेट पारित नभएपनि सरकारलाई खर्च गर्न छुट
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटसँग आश्रित ३ विधेयक पारित हुन बाँकी नै रहेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण यी विधेयकहरू पारित हुन नसकेपनि मन्त्रालयहरूले भने खर्चको अख्तियारी प्राप्त गरिसकेका छन्। सत्तासाझेदार दल नेकपा माओबादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विकास भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै पनि बजेटसँग आश्रित ... बाँकी अंश»
घर-बाटो प्रमाणितमा महानगरले शुल्क घटायो
२०७३ श्रावण ४ मंगलबार, काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि विभिन्न शीर्षकमा करको दर हेरफेर गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू भएको दरमा महानरपालिकाले विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउँदै विभिन्न घरबाटो प्रमाणितको शीर्षकमा साढे ६ हजार रूपैयाँसम्म दर घटाएको बताएको छ। यस अघि रहेको सेवाशुल्क तथा दस्तुर शीर्षकका विभिन्न दरहरूमा परिवर्तन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागले जनाएको छ । महानगरपालिकाले यस अघि घर ... बाँकी अंश»
मोदीखोलाबाट क्षमताको आधा मात्रै विद्युत् उत्पादन
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, फलेवास (पर्वत) । पर्वत जिल्लाको देउपुरमा सञ्चालित १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन थालिएको छ । खोलाको बाढी पसेपछि अवरुद्ध भएको विद्युत् उत्पादन आज बिहानदेखि सुरु भएको हो । बाढीका कारण इन्टेकभन्दा माथिल्लो भागमा समस्या आएपछि विगत पाँच दिनसम्म विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो । मर्मतपछि सोमबार बिहानदेखि उत्पादन पुनः सुरु भएको आयोजना प्रमुख तारादत्त भट्टले जानकारी दिए । उत्पादन सुरु भए पनि अहिले आधा क्षम ... बाँकी अंश»
नेप्से ४० अङ्कले बढ्यो
२०७३ श्रावण ३ सोमबार, काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा आज नेप्से परिसूचक ४० अङ्कले वृद्धि भई एक हजार ७८६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल १३७ कम्पनीको रु एक अर्ब ९५ करोड ४१ लाख ७० हजार ७६१ मूल्य बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । दैनिक चार घन्टा कारोबार सुरु भएको आज दोस्रो दिन बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बजार सदाझैँ ३ बजे बन्द हुँदा कुल २८ लाख ७० हजार ४९७ कित्ता सेयर बिक्री भएको छ । विभिन्न पाँच समूहको सेयर उकालो लागेकामा अर्को तीन वटा समूहको सेयर भने ओराल ... बाँकी अंश»